Sawirro: Beesha Baada Cadde Oo Wabar Cusub Caleyma Saaratay
Thursday February 11, 2021 - 19:47:55 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Munaasabad ballaaran oo ka dhacday deegaan hoostaga degmada Jalalaqsi ee Wilaayada Islaamiga Hiiraan waxey beesha Baada cadde oo ka mid ah beelaha dega Hiiraan ku caleyma saaratay Wabar cusub oo ay beeshu yeelatay.
Wabar cumar wabar cabdi wabar maxamed ayey beesha baada cadde uu caleyma saaratay inuu noqda wabarka guud ee beesha, waxaana xafladda kasoo qeyb galay kumanaan ruux oo goobo kala duwan ka kala yimid.
Wabarka oo goobta munaasbadda ka hadlay ayaa ballan qaaday inuu beesha ku hogaamin doona shareecada islaamka, Waxaana wabarka fagaaraha lagu gadoonsiiyay kitaabka Quraanka kariimka, Raayada towxiidka, gaari iyo qori iyo boosh.
Halkan Hoose Ka Daawo Sawirrada.
Diyaaradaha Yahuudda oo duqeymo cusub ka geystay magaalada Qaza.
Wasiirka cusub ee Amniga DF oo xilka kala wareegay ku xigeenkii Xundubeey.
R/wasaare Rooble oo Eryay Fahad Yaasiin taliyihii Sirdoonka mas'uul cusubna magacaabay.
Sawirro: Taliban oo tababar usoo xirtay guutooyin cusub duullaana ku qaadday gobol muhiim ah.
Taliban oo Muslimiinta ugu hambalyaysay guusha Afghanistan xukuumad cusubna soo dhisi doonta.